Ithegi: magento | Martech Zone
Onollo: Ulawulo lweMidiya yoLuntu kwi-Ecommerce
NgoLwesibini, Septemba 7, 2021 NgoLwesibini, Septemba 7, 2021 Douglas Karr
Inkampani yam ibincedisa abathengi abambalwa ngokuphumeza kunye nokwandisa iinzame zabo zokuthengisa eShopify kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngenxa yokuba i-Shopify inentengiso enkulu kumzi mveliso we-e-commerce, uyakufumanisa ukuba kukho itoni yokudityaniswa kwemveliso eyenza ukuba ubomi bube lula kubathengisi. Intengiso yorhwebo lwentlalo yaseMelika izakukhula ngaphezulu kwe 35% ukugqitha kwi $ 36 billion ngo-2021. Insider Intelligence Ukukhula kwezorhwebo kwezentlalo kukudibanisa
I-Moosend: Onke amaNqaku oMatshini wokuThengisa ukuKwakha, ukuvavanya, ukuKhangela, kunye nokukhulisa ishishini lakho
NgoLwesibini, Februwari 23, 2021 NgoLwesibini, Februwari 23, 2021 Douglas Karr
Enye into enomdla kushishino lwam kukuqhubeka kwezinto ezintsha kunye nokwehla okumandla kwixabiso kumaqonga ezentengiso aphucukileyo. Apho amashishini akhe achitha amakhulu amawaka eedola (kwaye asenza njalo) kumaqonga amahle… ngoku iindleko ziye zehla kakhulu ngelixa iiasethi zisaqhubeka ukuphucula. Kutshanje besisebenza kunye nenkampani yokwazisa ngefashoni ebikulungele ukusayina ikhontrakthi yeqonga elinokubabiza ngaphezulu kwesiqingatha sesigidi seedola.
Ukuhambisa ngokuLula: Amaxabiso okuhambisa ngenqanawe, ukuTrekhisa umkhondo, ukuleyibhelisha, Ukuhlaziya imeko, kunye nezaphulelo kwi-Ecommerce
NgoLwesibini, Januwari 5, 2021 Lwesine, ngoFebruwari 18, 2021 Douglas Karr
Kukho itoni yokuntsonkotha nge-ecommerce- ukusuka kulungiso lwentlawulo, ulungiselelo, ukuzaliseka, ukuya kuthumelo kunye nembuyekezo - uninzi lweenkampani luzijongela phantsi njengoko zithatha amashishini azo kwi-Intanethi. Ukuhambisa, mhlawumbi, yenye yezona zinto zibalulekileyo kuzo naziphi na izinto ezenziwa kwi-Intanethi- kubandakanya iindleko, umhla wokuhanjiswa oqikelelweyo kunye nokulandela umkhondo. Iindleko ezongezelelekileyo zokuhambisa ngenqanawe, iirhafu, kunye neefizi zazinoxanduva lwesiqingatha sazo zonke iinqwelo zokuthenga ezishiyiweyo. Ukuhambisa kancinci kuye kwanoxanduva lwe-18% yokuthenga okungasetyenziswanga
I-Omnisend: Iplatifomu ekulula ukuyisebenzisa ye-Ecommerce Email kunye ne-SMS yokuZenzekelayo
NgoLwesibini, nge-29 kaDisemba ngo-2020 NgoLwesibini, Januwari 12, 2021 Douglas Karr
Olunye lolona hambo lonwabisayo kwintengiso ezenzekelayo kulo nyaka, ngokoluvo lwam, ibikukuqhubela phambili kwezisombululo ezifikelelekayo zokuthengisa intengiso yakho ye-ecommerce. Amaqonga ezentengiso okuzenzekelayo kufuneka adityaniswe kwaye iphulo ngalinye liphuhliswe ngokuhamba kwexesha - ukumiliselwa kungathatha iiveki okanye iinyanga ngaphambi kokuba uqale ukubona ingeniso. Ngoku, la maqonga matsha awanamveliso nje kuphela, banamaphulo akulungeleyo ukwazisa ngokukhawuleza
NgoMgqibelo, Disemba 12, 2020 NgoLwesithathu, uDisemba 23, 2020 Douglas Karr